Foddaa faayila kuusdeetaa gabatee harkisuu fi dhiibuun garagalchuu dandeessa. Qaaqni Gabatee Garagalchi jedhu ni mul'ata.
Garagalchuuf maqaa adda baasa. Kuusdeetaan tokko tokko maqaa arfiilee saddet ykn isaa gadi qabu qofa fudhata.
Hiika fi deetaa
Kuusdeetaa 1:1 garagale uuma. Hiikkaan gabatee fi deetaa guutuun ni garagala. Hiikkaan gabatee caasaa fi dhangii gabatee dirreewwan deetaa of keessatti qabata, amaloota dirree adda of keessatti qabata. Qabiyyeen dirree deetaa qopheessa.
Hiika gabatee garagalchuu fi deetaa walgittaa miti.
Akka mul'annoo gabatee
Deetaa gabatee gara gabatee jiruutti akka garagaluuf miilteessi.
Hiikkaan gabatee walfakkaachuu qaba kanaaf deetaan garagaluu danda'a.Yoo dirreen deetaa gabatee galtee keessaa deetaa madda gabatee waliin walfakkaachuu baate garagalchuu hin dandeenyu.
Maqaa dirree qaaqa Gabatee Garagalchi dhaan walitti firoomsi fuulaTarjaalee Fayyadamii jedhuun.
Yoo deetaan milta'uu baate, qaaqa Infoo Tarjaa jedhu keessatti tarreewwan dirree kan deetaan isaanii garagaluu hin dandeenye arguu dandeessa. Qaaqa kana yoo OK n mirkaneessite, Deetaan tarree keessatti hin argamne ni miilta'a.
Yoo gabateen galtee gabatee maddaa dheerina dirree xiqqaa yeroo deetaan miilta'u qabaate,gabateen maddaa kan galtee waliin walgituuf dheerinni dirree hallaguu qaba.
Furtuu dursaa uumi
furtuu dursaa uumameef maqaa adda baasa. Maqaan kun filannoo dha.
Fuula Itti Aanu
This page is: /text/shared/explorer/database/05030100.xhp
Title is: Gabatee Garagalchi